Issimada Puntland oo ku baaqay in la joojiyo iska-horimaadka Galkacyo. – Radio Daljir
Issimada Puntland oo ku baaqay in la joojiyo iska-horimaadka Galkacyo.
Galkacyo, Sept 03 – Issimada Puntland ayaa baaq xabad joojin ah ka soo saaray dagaal khasaare badan gaystay oo ka dhacay magaalada Galkacyo.
Garaad Tamaam C/llahi Maxamuud Dacar oo ka mid ahaa Issimadii bud-dhigay Puntland ayaa ugu baaqay Issimada Puntland in ay shir deg deg ah ka yeeshaan colaada iyo iska-horimaadka ka dhacay magaalada Galkacyo.
Garaad Tamaam ayaa ugu baaqay dawlada Puntland in ay martigeliso shir ay isugu yimaadaan Issimada gobollada Puntland, laguna gorfeeyo xaalada amni ee gobolka.
Garaadka ayaa ugu baaqay shacabka reer Puntland in ay iska kaashadaan adkaynta amniga, ka shaqeeyaan midnimada, kana hortagaan khilaafaadka iyo amni darrida.
Inta la og yahay illaa 30 qof ayaa ku dhimatay iska-horimaadka 2-da maalmood ka dhacay magaalada Galakcyo, halka dhaawacana la sheegay in uu gaarayo ku dhawad 100 qof oo ay ku jiraan dad rayad ah.
Dawlada Puntland ayaa sheegtay in kooxaha ay dagaalka kula jiraan ay yihiin Al-shabaab iyo burcad badeed iskaashanaya; dhinaca kale ayaa dad u hadlaay kooxaha la dagaalamaya ciidanka dawladu ay sheegeen in ay yihiin beel ka mid ah beelaha Puntland oo duulaan lagu soo qaaday.
Iska-horimaadka ayaa ka dhashay hawlgal amni oo ay ciidanka amnigu ee magaalada Galkacyo ay ka fuliyeen xaafada Garsoor ee galbeedka magaalada; ciidanka ayaa la sheegay in ay ku raadjoogeen rag hubaysan oo la sheegay in ay taabacsan yihiin Al-shabaab oo dilal iyo qaraxyo ka fuliyey magaalada Galkacyo; waxaa sidoo kale la sheegay in ay xaafada ku xugan yihiin xubno ka tirsan Al-shabaab oo dhawaan ka soo qaxay magaalada Muqdisho.